Aluminium okanye iAluminium? Kutheni Kukho Amagama Amabini
Kutheni Kukho Amagama Amabini E-Element 13
I-Aluminium kunye ne-aluminium ngamagama amabini kwisigaba 13 kwitheyibhile yamaxesha . Kuzo zombini iimeko, isimboli sento ngu-Al, nangona amaMelika kunye namaKhanadi atshayela kwaye abiza igama elithi aluminium, ngelixa iBritish (kunye neyona yonke indawo yehlabathi) isebenzisa isipelingi kunye nokubiza amagama nge-aluminium.
Kutheni Kukho Amagama Amabini?
Unokumangalela umfumbi wezinto, uSir Humphry Davy , i-Webster's Dictionary, okanye i-International Union ye-Pure ne-Applied Chemistry (IUPAC).
USir Humphry Davy ucebise igama elithi aluminium xa ebhekisela kwi-1812 ethi Elements of Chemical Philosophy , nangona wayesebenzisa igama elithi alumium kwi-element (1808). Naphezu kwamazwi amabini kaDavy, igama elisemthethweni elithi "aluminium" lavunyelwa ukuba lihambelane namagama -aye amanye amanqaku. I-1828 yeWebster's Dictionary yasebenzisa "i-aluminium" isipelingi, egcinwa kwimiqulu kamva. Ngomnyaka we-1925, i-American Chemical Society (ACS) yagqiba ekubeni ihambe kwi-aluminium yangaphambili kwi-aluminium yasekuqaleni, ibeke i-United States kwiqela "aluminium". Kwiminyaka yakutshanje, i-IUPAC yachonga "i-aluminium" njengopelo olufanelekileyo, kodwa ayizange ifumaneke kuMntla Melika, ekubeni i-ACS isebenzisa i-aluminium.
Olongezelelweyo Ngomlando weAluminium-Aluminium
Udidekile? Nantsi into encinane malunga nembali yegama le-aluminium kunye nokufumanisa .
UGuyton de Morveau (1761) wabiza i-alum, isiseko esaziwayo kumaGrike namaRoma asendulo, egama elithi alumine. Ngo-1808, u-Humphry Davy wachaza ubukho bentsimbi kwi-alum, okokuqala ebizwa ngokuba yi-alumium kunye ne-aluminium kamva. UDavy wayesazi i-aluminium, kodwa akazange ahlukanise loo nto.
UFriedrich Wöhler olwahlukileyo aluminium ngowe-1827 ngokuxuba i-aluminium e-aluminium ne-potassium. Enyanisweni, isinyithi saveliswa kwiminyaka emibini ngaphambili, nangona kunjalo nangendlela engcolileyo, yi-Danish physicist kunye nomkhandi wenzululwazi uHans Christian Ørsted. Ngokuxhomekeke kwimvelaphi yakho, ukufunyanwa kwe-aluminium kuthiwa yi-Ørsted okanye i-Wöhler. Umntu ofumanisa i-element ufumana ilungelo lokubiza igama, kodwa ukuba ngubani umthengi uphikisana njengaloo gama!
Yiyiphi echanekileyo -Aluminium okanye iAluminium?
IUPAC inqume ukuba ipelisi ilungile kwaye iyamkeleka. Nangona kunjalo, isipelingi esamkelweyo eNyakatho Melika yi-aluminium, ngelixa upelo olwamkelweyo malunga nantoni na indawo enye i-aluminium.
I-Element 13 Ukubiza Amaphuzu aphambili
Inombolo ye-athomu yesi-13 inomqondiso uAl kunye nokuba negama eluminiyamu okanye i-aluminium.
I-Aluminium yigama legama elisetyenziswe eUnited States. I-Aluminium yipelo elikhethiweyo kwenye indawo kwihlabathi.
IUPAC iyamkela nokuba ipelenzi. Kwipapasho, isipelingi kufuneka ihambelane nokukhethwa okusetyenziswayo kweli lizwe.
"Igazi, Ukusebenza, Iinyembezi, kunye nephupha" Intetho kaWinston Churchill
Sigaba Shintsha utshintsho
U-Niobe WayenguNtombi kaTantalus no-Queen of Thebes